Masaka Godaansa Maakiroo Galmee Kuusdeetaa maakiroosii jiru galmeewwan xiqqaa faayilii Baazii duraa irraa gara naannoo kuusa maakiroo faayilii haaraa siksa.
Duraan, maayikiroon barruu galmee xiqqaa fi gabaasa keessa jirachuu eeyyame. OpenOffice.org 3.1 yookin StarOffice 9.1 eegaluun, maayikiroon faayilii Bu'uuraa mata isaa keessa jiraachuu eeyyama. Kana jechuun faayiliin Bu'uuraa qaama xiqqaa isaa kamiyyuu irraa waamama: unkawwan, gabaasota, saxaxa gabatee, saxaxa gaafata, saxaxa firooma, mul'annoo gabatee deetaa.
Haata'ee malee, maayikiroo faayilii bu'uuraa fi galmee xiqqaa erga tokko teeknikaan olkaa'uun hin danda'amu. Kanaafuu, yoo maayikiroo haaraa faayilii Bu'uuratti maxxansuu barbaadde, yommuu maayikirii duraanii kan galmee xiqqaa keessaa argachuu barbaadde, maayikiroo duraan jiru gara faayilii Bu'uuraatti ol bal'ina olkaawwii maayikirootti siksuu qabda.
Galmeen Kuusdeetaa Masaka Godaansa Maayikiroo maayikiroo gara faayilii bal'ina kuusaa Bu'uuraatti siksuu dandeessa. Maayikiroo akka barabaadamanitti qorachuu fi gulaaluu dandeessa.
Fakkeenyaaf, maayikiroon galmee xiqqaa irraa halata maqaa fi maqaa maayikiroo tokko qabachuu ni danda'a. Erga maayikiroo gara bal'ina kuusaa maayikiroo waliinitti siksitee booda, maayikiroo adda godhuuf gulaaluu qabda. Masakni kana hin hojjetu.
Masakni faayilii Bu'uuraa gara bocquu filatetti dilbeessuu dandeessa. Maskni faayilii xabboo Bu'uuraa jijjira. Dilbiin osoo hin jijjiiramin hafa.
Title is: Maakroosi Godaansaa